ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အလှဆုံးသော ကျွန်းလေး
မြေထဲပင်လယ်ထဲက ဂရိနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ဒီကျွန်းသေးသေးလေးရဲ့ ဖမ်းစားနိုင်မူက အံမခန်းပါပဲ… သူ့ရဲ့ ချောက်ကမ်းဘားဘေးနားက အစီအရီ အိမ်ဖြူဖြူလေးတွေ ဘုရားကျောင်းခုံးအပြာရောင်တွေနဲ့ ပင်လယ်ပြာကြီးတွေပါတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို မြင်လိုက်ရရုံနဲ့တင် သွားချင်စိတ်က ထိန်းလို့မရဖြစ်လာတတ်တယ်… ပြီးရင် လှလိုက်တာ ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာလို့ တဖွဖွရေရွတ်ရတဲ့အထိကို သူ့အလှက ဖမ်းစားတယ်.. ဒီနေရာလေးကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဂရိဆိုတာကို တန်းသိနိုင်လောက်အောင်ကို သူ့နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်စားပြုတယ်..
တကယ်တော့ ဂရိမှာ သူ့လိုမျိုးလှပတဲ့ ကျွန်းတွေအများကြီးပါ.. အဲ့ဒီထဲကမှ Santorini လို့ခေါ်တဲ့ ဒီကျွန်းလေးက ဘာလို့ ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့သလဲလို့မေးရင် ကိုယ့်အမြင်ကတော့…
1 ☀️သူုရဲ့တောက်ပနေတဲ့နေရောင်ခြည်…နေအရမ်းပူနေတာတောင် ချွေးမထွက်ပဲ လေနုအေးလေးတွေအောက်မှာ စလိုက်မီးတွေ ထိုးထားသလို ဘာဓါတ်ပုံရိုက်ရိုက်လှနေတာ..
2 🌊သူရဲ့ ပင်လယ်ပြာကြီး .. ပင်လယ်တိုင်းကပြာလဲ့နေတာမှန်ပေမယ့် ချောက်ကမ်းဘားအောက်ကို ငုံ့ကြည့်ရင်း အရှေ့က မီးတောင်တွေနဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ပင်လယ်ဟာ ဘာလို့မှန်းမသိ လှလွန်းတယ်..
3 💙သူ့ဆိုတာကိုသိစေတဲ့အိမ်လေးတွေ.. တောင်စောင်းတွေမှာ အစီအရီနဲ့ အိမ်ဖြူဖြူလေးတွေ ခြံစည်းရိုးအပြာလေးတွေ..ဘုရားကျောင်းတွေဟာ ကောင်းကင်ပြာကြီးအောက်နဲ့ခမ်းလှမ်းလှမ်းကပင်လယ်ပြာကြီးကြားမှာ သိပ်လှတဲ့ပန်ချီကားတစ်ချပ်ပေါ့..
4 👙သူ့ရဲ့ကမ်းခြေတွေ … တခြားမှာမရှိနိုင်တဲ့ ကမ်းခြေတွေကိုလဲံသူကပိုင်ဆိုင်ထားပြန်သေးတယ်.. သဲအမဲတွေနဲ့ ကမ်းခြေ… အနီရောင် တောင်နံရံကြီးတွေနဲ့ ကမ်းခြေ… သဲအစားကျောက်စရစ်ခဲတွေပဲရှိတဲ့ ကမ်းခြေတွေ ..ဟာရေကူးရုံတင်မက ဓါတ်ဖမ်းဖို့ပါ အလွန်မိုက်နေတယ်..
5 🌥 သူ့ရဲ့နေဝင်ချိန်တွေ .. ကောင်းကင်ဟာပုဇွန်ဆီရောင်တောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ မီးတောင်ကြားမှာ ရှိတဲ့ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲနေဝင်သွားတာ သိပ်လှတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ.. နေဝင်ချိန်နဲ့အပြိုင် အိမ်ဖြူလေးတွေက မီးစထွန်းပီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တွေဘယ်မှာမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ရူခင်းမျိုးကို သူရဲ့ဒေသထွက် ၀ိုင်တစ်ခွက်နဲ့ဇိမ်ခံရင်း ခံစားလို့ရတယ်..
6 🌺သူ့ရဲ့ ရူမျှော်ခင်းတွေ .. ကျွန်းကသေးတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မှာ မတူညီတဲ့ ရူခင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်..မီးတောင်ပေါက်ကွဲမူကနေဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်းဖြစ်လို့လားမသိဘူး..တစ်ဖက်က ချောက်ကမ်းပါး နဲ့ တစ်ဘက်က မြေပြင်ပြေပြစ်တဲ့ ကမ်းခြေပိုင်းရှိတယ်.. အလယ်မှာ တောင်ကုန်းလေးတွေနဲ့ မို့သိပ်ကိုလှတယ်.. ပင်လယ်ထဲကနေ ကျွန်းကိုလှမ်းကြည့်ရင်လဲ ချောက်ကမ်းပါးထိပ်က အိမ်ကလေးတွေ နဲ့ ပင်လယ်ပြာကြီးကသိပ်ကို ပနံသင့်တယ်… စက္ကူပန်းအဆုပ်လိုက်ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ အိမ်ဖြူလေးတွေကလဲ သူ့ရဲ့သိပ်လှတဲ့ရူခင်းတွေကိုထောက်ပံပေးထားပြန်တယ်..
7 👒သူ့ဆီလာလည်တဲ့ လူတွေ… တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ သိပ်မတွေ့ရတဲ့ အမိုက်စား နွေရာသီ ဖက်ရှင်တွေကို အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ ၀တ်စားထားတဲ့ အနောက်တိုင်းသူတွေ ကို မြင်ရတာ Fashion Runway တစ်ခုလိုပဲ..ညနေဘက် ဘားတွေ နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ date လုပ်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေကို မြင်ရတာလဲ ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်..
ဒါတွေကတော့ ကိုယ်သူ့ကို နှစ်သက်မိတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်ပြီး တစ်ကယ်တမ်းအပြင်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ တောင်ရိုက်ပြလို့မရတဲ့ အလှတရားနဲ့ စာနဲ့ရေးဖွဲ့လို့ မရတဲ့ သူ့ရဲ့ atmosphere က တော့ရောက်သွားပြီးကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်မှပဲ သိပါလိမ့်မယ် ..ကိုယ်ပြောတာ မပိုဘူးဆိုတာကို .. 
အဲ့ဒီတော့ ..ဒီလို ဒဏ္ဍာရီ ဆန်လွန်းလှတဲ့နေရာလေးကို ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သွားလည်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် လွယ်ကူအောင် ..ကိုယ်သေသေချာချာလေးရေးပေးလိုက်ပါတယ်..
ဂရိနိုင်ငံဆိုတာ ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲက နိုင်ငံလေးတစ်ခုပါ.. သူ့ဆီသွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ ဥရောပတိုင်းပြည်တွေလိုပဲဗီဇာလိုပါတယ်.. ရှန်ဂန်ဗီဇာပါ.. သူ့ဆီကိုတိုက်ရိုက်သွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ဂျာမနီသံရုံးကနေ ဗီဇာလျှောက်ရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကတော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ Link ထဲမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်.. https://www.facebook.com/ilovetravellingmyanmar/posts/1762976330396866?hc_location=ufi အကယ်လို့ ကိုယ်က တခြားဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုခုကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရှန်ဂန်ဗီဇာရှိနေပြီးသားဆိုရင်ထပ်လျှောက်စရာမလိုပါဘူး.. ဗီဇာသက်တမ်းကျန်မယ်ဆိုရင်ဝင်လိုက်ရုံပါပဲ..
📆 ဘယ်အချိန်တွေမှာသွားလည်သင့်သလဲ 📆
ဆန်တိုရိနီဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလည်နိုင်တဲ့ နေရာမဟုတ်ပါဘူး.. မနှစ်ကနေစပြီးတော့ တစ်နစ်ပတ်လုံးလည်ပတ်နိုင်ရန် သူတို့ tourism က promote လုပ်နေပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ တချို့လတွေမှာသွားလာလို့မကောင်းသေးပါဘူး ..
နိုဝင်ဘာလကနေ မတ်လကုန်လောက်ထိက သူ့ဆီမှာ ဆောင်းတွင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ခရီးသည်လုံးဝလိုလိုမရှိပါဘူး.. အဲ့ဒီအတွက် ဟိုတယ်တွေ, စားသောက်ဆိုင်တွေ နဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းဆိုင်တွေ အကုန်လုံးနီးပါးပိတ်ပါတယ်.. သူ့ဆီကိုသွားတဲ့ သဘောင်္တွေလဲမထွက်တာများပါတယ်. ရာသီဥတုအေးပြီးလေတိုက်တဲ့အတွက် သွားလာလို့မကောင်းတဲ့လတွေဖြစ်ပါတယ်. ဥရောပတခြားမြို့တွေကနေ ကျွန်းကို အဲ့ဒီအချိန်ဘယ်လေယာဉ်မှ မပျံသန်းပါဘူး..
ဧပြီ နှေုာင်းပိုင်း, မေ , နဲ့ အောက်တိုဘာလတွေဟာ သူတို့ဆီက shoulder season လို့ခေါ်ပါတယ်.. ဧည့်သည်သိပ်မကျသလို ဆိုင်တွေ ဟိုတယ်တွေလဲပြန်ဖွင့်နေပြီမို့ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့သွားချင်တဲ့လူတွေအတော်အဆင်ပြေပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တွေဟာအေးနေသေးတဲ့အတွက် ရေကူးချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေပါဘူး.. လျှောက်လည်ချင်တဲ့လူတွေ.. pre wedding ရိုက်ချင်တဲ့သူ .. honey moon သမားများအတွက်ကတော့ လူရှင်းနေတဲ့အတွက် အတော့်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်..
ဂျွန် ..ဂျူလိုင် သြဂုတ် နဲ့ စက်တင်ဘာ.. ဒီလတွေကတော့ သူတို့ဆီရဲ့ တကယ့် high season ပါ.. နေရောင်တောက်ပလွန်းပြီး နွေးထွေးနေတဲ့ ဒီကျွန်းလေးရဲ့ ပင်လယ်ရေအေးစက်စက်ထဲကို ဆင်းလိုက်ရတဲ့အရသာဟာဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး.. ဧည့်သည်အရမ်းများပြီး ဟိုတယ်တွေ ကားငှားခတွေကအစ စျေးတွေကြီးနေပါပြီ.. တစ်ခုကောင်းတာက အဲ့ဒီအချိန်ဆို ကျွန်းကိုသွားတဲ့ transportation တွေတော်တော်များနေပြီမို့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး..လူများတဲ့ အတွက် ဟိုတယ်တွေ လေယာဉ်လက်မှတ်သဘောင်္လက်မှတ်တွေ ကြိုတင် book လုပ်မှ စျေးသက်သာစွာနဲ့ရမှာပါ..
ဆန်တိုရိနီ ဆိုတာ ဂရိနိုင်ငံထဲကကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်.. ဂရိနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် အေသင်မြို့ကနေ km 300 လောက်ဝေးတဲ့ ဒီကျွန်းလေးကို သွားဖို့ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကနေ အေသင်မြို့ကို လေယာဉ်အရင်စီးပြီးမှ အေသင်ကနေ တဆင့် သဘောင်္ သို့ လေယာဉ်နဲ့ သွားရမှာပါ.. တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေ လည်ပြီးမှ ဒီကျွန်းလေးကို သွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချို့ ဥရောပမြို့ တွေကနေ ကျွန်းအထိတိုက်ရိုက်လေယာဉ်ရှိပါတယ်.. စျေးလဲသက်သာပါတယ်.. တိုက်ရိုက်သွားနိုင်တဲ့ မြို့တွေကတော့.. Paris , Amsterdam , London , Barcelona , Madrid , Milan , Rome , Zurich , Brussels , Munich , Vienna စတဲ့ မြို့ကြီးတော်တော်များများကနေ တိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်.. ကိုယ်တွေ Madrid ကနေသွားတာ ယူရို 150 လောက်ပဲပေးရပါတယ်.. ကြိုဝယ်ထားရင်တော့ဒီထက်စျေးပိုသက်သာပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကနေ ဂရိကိုပဲသီးသန့်လည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စျေးသက်သာတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ Scoot Airlines က အခုဆိုရင် Singapore ကနေ Athens ကို တိုက်ရိုက်တစ်ပတ်ကို လေးကြိမ်ဆွဲနေပါတယ်.. Singapore – Athens အသွားအပြန်မှ Budget Airlines ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ကြိုဝယ်ထားရင် 600US$ လောက်နဲ့ရပါတယ်.. Yangon – SG ကတော့ အဆင်ပြေတဲ့စျေးပေါတဲ့ Airlines နဲ့သွားပြီး SG ကဗီဇာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ အေးဆေး SG ထဲဝင်ပြီး Check-in ပြန်လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်.. SG ကနေ အေသင်မြို့အထိ တိုက်ရိုက်လေယာဉ်ဆိုတော့ လေယာဉ်စီးချိန် ၁၁ နာရီကျော်ကြာပါတယ်.. budget airlines ဖြစ်တဲ့အတွက်လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘာမှ မကျွေးပါဘူး Entertainment လဲမပါပါဘူး.. အဲ့ဒီအတွက်လေယာဉ်ပေါ်မှာ ၀ယ်စားဖို့ တစ်ကြောင်းကို အနည်းဆုံး 30US$ လောက်စီထည့်တွက်ထားဖို့လိုပါတယ်.. budget air မစီးချင်တော့ တခြား Airlines တွေစီးလို့ရပါတယ်..
ရန်ကုန်ကအထွက်တခါတည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းစျေးကြီးပါတယ်.. အနည်းဆုံး အသွားအပြန် 1200 US$ လောက်ကနေစပါတယ်.. အဲ့ဒီတော့ အကြံပေးရရင် Ygn-SG သို့ Ygn-Bkk ကို သက်သာတဲ့ Airlines နဲ့သွားပြီး SG (or) BKK ကနေမှ တခြား Airlines တစ်ခုခုကို Sky Scanner နဲ့ဝယ်တာ ပိုသက်သာပါတယ်..
🛫🛳 အေသင်မှ ဆန်တိုရိနီ ..
ဆန်တိုရိနီတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့ လေယာဉ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိပေမယ့့် အေသင်ထိပဲဆိုရင်တော့ အေသင်ကနေကျွန်းကိုဆက်သွားဖို့ လေယာဉ် သို့ သဘောင်္စီးရမှာပါ..
လေယာဉ် : ရာသီချိန်တွေမှာတော့ အေသင်ကနေ ကျွန်းကိုသွားတဲ့ လေယာဉ်လိုင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်.. Olympic Air ( Aegean Airlines ) နဲ့ စျေးသက်သာတဲ့ Ryanair ပါ.. တစ်နေ့ကို Airlines နှစ်ခုပေါင်း9ကြိမ်လောက် ပျံသန်းပါတယ်.. 45 မိနစ်သာစီးရမှာပါ.. ကြိုဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ကြောင်းကို 100$ ပတ်ချာလည်လောက်သာပေးရမှာပါ.. skyscanner မှာ ကြိုဝယ်လို့ရပါတယ်.. ကြိုဝယ်ရင် သဘောင်္စီးရတာထက်လေယာဉ်နဲ့သွားရတာ ပိုတန်ပြီး အဆင်ပြေပါတယ်..
သဘောင်္ : Ferries လို့သူတို့အခေါ် သဘောင်္တွေကလည်း ရာသီချိန်ဆို အေသင်လေဆိပ်ကနေ တစ်နာရီလောက်ကားနဲ့သွားရတဲ့ Piraeus ဆိုတဲ့ ဆပ်ကမိးကနေ ကျွန်းကို တစ်နေု့ လေးကြိမ်လောက်ပြေးဆွဲပါတယ်.. High-speed စီးမလား ရိုးရိုးပုံမှန်သဘောင်္စီးမလားရွေးလို့ရပါတယ်.. လေဆိပ်ကနေ အပြင်ဘက်ထွက်လိုက်တာနဲ့ x96 ဘတ်စ်ကားကို တက်စီးပြီး သဘောင်္ဆိပ်ကိုသွားလို့ရပါတယ်.. 6ယူရိုပဲပေးရပါတယ်.. taxi နဲ့ ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး 50 ယူရိုလောက်ကျမှာပါ..
Blue Star Ferries : အကောင်းဆုံးသဘောင်္ပဲလို့ကိုယ်ကတော့ညွှနိးပါရစေ.. အေသင်ကနေ ကျွန်းကို 8 နာရီကြာပြီး မနက် 7:25 မှာ အေသင်ကထွက်ပါတယ်.. ကျွန်းကနေတော့ ညနေ 3:30 မှာ ပြန်ထွက်ပါတယ်.. တစ်နှစ်ပတ်လုံးပြေးဆွဲပြီး ရာသီချိန်မှာ တော့ တစ်ပတ်ကို သုံးရက် ( tue, Fri, Sun ) ညပိုင်းပါပြေးဆွဲပါတယ်.. လေယာဉ်ခုံတွေလို ..business class အိပ်စင် စသဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးပြီး book လုပ်နိုင်ပါတယ်.. စောစောရောက်ခဲ့ရင်တော့ လှေဆိပ်မှာလဲလက်မှတ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်.. ယူရို 40 လောက်ကနေစပြီး ယူရို 80 လောက်ထိရှိပါတယ်.. သဘောင်္ပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေရော lounge တွေ .. ကလေးကစားကွင်းတွေ ..စားသောက်ခန်းမတွေပါပါတဲ့ 8 ထပ်ရှိတဲ့သဘောင်္ ကြီးဖြစ်လို့ စီးရတာ အရမ်းကို သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်.. ရူခင်းကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေလဲအများကြီးပါပါတယ်.. မြေထဲပင်လယိထဲကို အမိုက်စားသဘောင်္ကြီး စီးတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဒီခရီးစဉ်မှာ အရယူနိုင်ပါတယ်.. ဒီ link မှာ ၀င်ရောက် book လုပ်နိုင်ပါတယ်.. https://www.bluestarferries.com/en/
Hellenic Seaways High-speed : သူကတော့ အနည်းငယ်ပိုမြန်တဲ့ ဖယ်ရီဖြစ်ပြီး blue star လောက်သိပ်မကြီးပါဘူး..6နာရီသာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး မနက် 7:15 မှာအေသင်ကနေထွက်ပြီး နေ့လည် 1 နာရီလောက်မှ ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ရာသီချိန်မှာတော့5နာရီသာ ကြာမြင့်တဲ့ ဖယ်ရီလဲ စီးလို့ရပါတယ်.. 60 ယူရို ကနေ 90 ယူရို အထိ ကိုယ်စီးမယ့် class ပေါ်မူတည်ပြီးစျေးကွာပါတယ်.. https://hellenicseaways.gr/en/
Sea Jet : သူကတော့ တကယ့်ကို အမြန်ယာဉ်ပါ..သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီးဖူးလို့ သူပြောပုံအရတော့ လိူင်းမူးတတ်ရင်မစီးသင့်ပါဘူးး ဖယ်ရီကသေးတဲ့ အတွက်ထိုင်ခုံတွေကလဲ သိပ်မကျယ်ပါဘူး.. အမြန်ဆုံးဖယ်ရီဖြစ်ပြီး 4နာရီသာ ကြာပါတယ်.. မနက် 7နာရီထွက်ပြီး 11 ဆိုရောက်ပါပြီ… high season မှာတော့ ညနေ 3:45 မှာထွက်ပြီး ည 9နာရီလောက်မှာ ရောက်ပါတယ်.. သူလဲ စျေးနူန်းက 60 ယူရို ကနေ 90 ယူရို အထိ ကိုယ်စီးမယ့် class ပေါ်မူတည်ပြီးစျေးကွာပါတယ်.. https://www.seajets.gr/en/
🏡 ဘယ်မှာနေကြမလဲ ..
ဆန်တိုရိနီဟာတကယ်တော့ သေးသေးလေးပါ 48မိုင်ပတ်ချာလည်သာရှိပြီး တောင်နဲ့မြောက်ကို မိနစ် 50လောက် ကားမောင်းရုံနဲ့ ရောက်နိုင်ပြီး အရှေ့နဲ့အနောက် အဝေးဆုံးနေရာမှ မိနစ် နှစ်ဆယ်မောင်းရုံသာရှိပါတယ်.. ဆိုတော့ကာ ဘယ်မှာနေနေ လည်မယ့်နေရာတွေနဲ့ သိပ်ပြီင်္းတော့ အဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး.. အရေးကြီးတာက ကိုယ်ဟာဘယ်လိုမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ဘယ်သူတွေနဲ့သွားမှာလဲ ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်.. ကမ်းခြေတွေက ရိုးရိုးဟိုတယ်တွေမှာ ပဲချွေတာလိုက်မလား.. သူတို့ရဲ့ cave house လေးတွေမှာနေကြည့်မလား.. ချောက်ကမ်းဘားဘေးက resort တွေမှာလား.. private pool နဲ့ မြင်ကွင်း အမိုက်စား villa တွေမှာနေချင်တာလားဆိုတာကိုတော့ သိဖို့လိုတယ်.. ဆန်တိုရိနီမှာ ဟိုတယ်တွေရှာချင်ရင်တော့ www.booking.com ကအကောင်းဆုံးပါပဲ..
Oia : ဆန်တိုရိနီရဲ့ အလှဆုံးနေရာလေးဖြစ်သလို ရိုမန်တစ် အဖြစ်ဆုံး နေဝင်ချိန် အလှဆုံး ကျွန်းရဲ့ မြောက်ဘက်ဆုံးမှာ တည်ရှိတဲ့ နေရာလေးပါ .. ကျွန်းရဲ့ အကောင်းဆုံးသော ဟိုတယ်တွေတည်ရှိတဲ့နေရာလဲဖြစ်ပြန်တယ်.. . villa တွေ အများကြီးနဲ့ ..ကိုယ့်အခန်းပြတင်းပေါက်ကထွက်လိုက်ရင်ပဲ ပင်လယ်ကြီးကို တန်းမြင်နေရတဲ့ တချို့ villa တွေဆို အခန်းရှေ့မှာတင် Jacuzzi တွေနဲ့ မြင်လိုက်တာနဲ့နေချင်စရာဖြစ်သွားတဲ့ villa တွေအများကြီးစုနေရာပေါ့ .. ချောက်ကမ်းပါးစွန်းက ဟိုတယ်တွေက အနည်းဆုံး တစ်ည ကို 1000$ လောက်ရှိနိုင်ပြီး ပင်လယ်ဘက်ကို မမြင်ရတဲ့ ဒီဘက်အခြမ်းတွေကတော့ တစ်ည 200 $ ကျော်လောက်ကနေစပြီးရနိုင်ပါတယ်.. Oia မှာ တည်းမယ်ဆိုရင်တော့ ချောက်ကမ်းပါးဘက်က ဟိုယ်တွေမှာ နေမှသာ အဓိပပါယ်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဘက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ မနေဖို့ပဲ အကြံပေးပါစေ.. အခန်းခတွေ တခြားနေရာတွေထက်စျေးကြီးပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေလဲစျေးပိုမိုပြီး nightlife လဲမရှိတဲ့ အတွက် စျေးကြီးတာပဲ အဖတ်တင်မှာပါ.. ချောက်ကမ်းပါးဘက်က ဟိုတယ်တွေကတော့ ကလေးတွေလက်မခံတာများပါတယ်.. လူအများကြီးနဲ့ သွားတဲ့ တိုးလို မျိုးတွေဟာလဲ Oia မှာ အဆင်မပြေပါဘူး …လှေကားကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေအများကြီးဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အထုပ်သယ်ဖို့လဲ လူခေါ်ရမှာပါ.. ဟိုတယ်တွေကတော့ အဲ့ဒီ service ကိုပေးတာများပါတယ်.. ပိုက်ဆံသိပ်လှည့်ကြည့် စရာမလို့တဲ့ Honeymoon ထွက်တဲ့အတွဲတွေ အတွက်တော့ Oia ဟာသိပ်ကိုနေလို့ကောင်းမှာပါ.. High season မဟုတ်တဲ့ ရာသီကုန်ခါနီးချိန်တွေ ရာသီစခါနီးအချိန်တွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ Oia ရဲ့ ချောက်ကမ်းပါးက cave house လေးတွေမှာနေပါလို့ အကြံပေးပါရစေ.. မထင်မှတ်တဲ့စျေးတွေနဲ့ အမိုက်စား villa တွေမှာ နေနိုင်လို့ပါ..
Fira : Oia လိုပဲ Fira ဟာလဲသိပ်ကိုလှတဲ့နေရာလေးပါ.. သူက Oia ထက်ပိုကြီးပြီး စျေးလဲပိုသက်သာပါတယ်.. ကျွန်းပေါ်ကအကြီးဆုံး မြို့လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်.. စားသောက်ဆိုင်တွေ ..nightlife တွေ တိုးတွေက အစ တော်တော်လေးကို ပေါပါတယ်. ဟိုတယ်တွေလဲတော်တော်ပေါပါတယ်.. ချောက်ကမ်းပါးက cave houseတွေရော villa တွေရော Oia လိုပဲရှိပြီး သူကစျေးပိုသက်သာပါတယ်.. သူလဲ ပင်လယ်မမြင်ရတဲ့ ဘက်မှာ ဟိုတယ်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်.. အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေက ပိုတောင်သက်သာပါတယ်.. မိသားစုတွေ.. သူငယ်ချင်းတွေ ..တိုးတွေ စတဲ့လူများများနဲ့ လာတဲ့သူတွေ Fira ရဲ့ ဒီဘက်ခြမ်းမှာ နေလို့ရပါတယ်.. ကမ်းပါးဘက်မှာ တော့ Honeymooner တွေနဲ့ လူငယ် အုပ်စုတွေ ဒါမှမဟုတ် ကလေးမပါတဲ့ လှေကားတက်ရမှာ မညောင်းတတ်တဲ့သူတွေ နေလို့ရပါတယ်.. ရူခင်းကအမိုက်စားမို့ပါ..
Imerovigli , Firostefani : သူက Oia နဲ့ Fira ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ .. Fira နဲ့တော့ သိပ်မဝေးပါဘူးး ..ရူခင်းလဲအမိုက်စား တိတ်ဆိတ်တာကိုကြိုက်တဲ့စုံတွဲတွေ ရွေးချယ်လို့ရတယ်.. စားသောက်ဆိုင်ဘာညာကတော့ Fira ဘက်ကို လမ်းလျှောက် သို့ ကားမောင်းသွားမှ အဆင်ပြေမှာပါ..
Kamari Beach : တိုး နဲ့လာတဲ့သူတွေနဲ့ မိသားစု နဲ့လာတဲ့သူတွေတော်တော်များများ ဒီကမ်းခြေနားက ဟိုတယ်မှာနေတာတွေ့ရတယ်.. စျေးလဲချိုုတယ်.. ကမ်းခြေနဲ့ ကပ်ရပ်ဆိုတော့ ရေကူးမလား ကမ်းခြေတစ်လျှောက်အနားယူမလား..လှေကားတွေလဲတက်စရာမလို.. စားသောက်ဆိုင်တွေလဲပေါ..စျေးလဲပေါဆိုတော့ လူများရင် စျေးသက်သာချင်ရင်ဒီဘက်ပိုင်းမှာ နေပါလို့ အကြံပေးပါရစေ.. သူဆီကနေလဲ Oia နဲ့ Fira ကို သွားလည်လို့ရတဲ့ ဘတ်စ်တွေ တိုးတွေလဲ အများကြီးထွက်တယ်.. လေဆိပ်ရော သဘောင်္ဆိပ်နဲ့ပါနှီးတယ်.. View နဲ့ သူ့ရဲ့ taste ကတော့ ဆန်တိုရိနီထက်ဆိုတာထက်ကို ကမ်းခြေရဲ့ အရသာကိုပိုပေးတယ.်.ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဟိုတယ်တွေကလဲ ကျွန်းရဲ့ စတိုင် အဖြူနဲ့အပြာလေးတွေမို့ ချစ်စရာလေးတွေပါ.. Nightlife တွေရော supermarket တွေပါရှိလို့ ပျင်းစရာတော့ လုံးဝမကောင်းတဲ့နေရာလေးပါ.. စုံတွဲတွေ အတွက်တော့ သိပ်မသင့်တော်ပါဘူးး။။
Perissa beach : Kamari Beach နဲ့ ကပ်ရပ် သဲအမဲတွေရှိတဲ့ကမ်းခြေပေါ.. water sports တွေ nightlife တွေလဲရှိတဲ့ စည်ကားနေတဲ့ ကမ်းခြေပေါ့.. Kamari Beach နဲ့ ကပ်ရပ်ဆိုတော့ အပေါ်မှာပြောထားသလိုပါပဲ..
Pyrgos : ကိုယ်တွေနေခဲ့တဲ့ နေရာလေးပေါ့.. သူကထူးထူးဆန်းဆန်း ကမ်းခြေဘက်လဲမဟုတ် ချောက်ကမ်းပါးလဲမဟုတ်တဲ့တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆန်တိုရိနီရဲ့ အလယ်ပိုင်းကျကျမှာရှိတဲ့ချစ်စရာ ရှေးဟောင်းရွာလေးပေါ့..ဆန်တိုရိနီရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာလေးဆိုရင်လဲမမှားဘူး.. အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့အားသာချက်က တစ်မြို့လုံးကို panoramic view နဲ့မြင်နေရတယ်.. နေထွက်ချိန် နေဝင်ချိန်တင်မကပဲ ညဘက်မီးရောင်စုံထွန်းတဲ့အချိန်တွေပါအကုန်မြင်နေရတယ်. ကျွန်းရဲ့အလယ်မှာ ရှိလို့ ဘယ်သွားသွားအဆင်ပြေတယ်.. ကိုယ်တွေနေခဲ့တဲ့ cave house လေးဆိုနှစ်ပေါင်းသုံးရာရှိပြီတဲ့ .. တောက်ကုန်းလေးဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းလှေကားတွေတက်ရတယ်.. ဒါပေမယ့်သူ့လှေကားတွေကတခြားနေရာကလှေကားတွေထက်ကျယ်တယ်. ပြိးတော့ အထုပ်တွေကို လူကိုယ်တိုင်သယ်စရာမလိုပဲ မြည်းလေးတွေနဲ့ သယ်လို့ရတယ်.. ရွာထဲမှာ မြည်းလိုက်စီးလို့လဲရတယ်. တောင်ကုန်းထိပ်က ရဲတိုက်ကြီးကနေ နေဝင်ချိန်လာလာကြည့်ကြတယ်.. ကို်ယ်တွေနေခဲ့တဲ့ Cave House လေးနာမည်က Chrisanthi Villa တဲ့ ..အဲ့ဒီရွာလေးမှာ သူတို့ရိုးရာ cave houseလေးတွေမှာ နေကြရတာများတယ်.. hotel သိပ်မရှိဘူး.. အိမ်တစ်လုံးစီမှာ အခန်း အနည်းဆုံး နှစ်ခန်းလောက်ပါတယ်.. ကိုယ်တွေလို အုပ်စုလိုက်သူငယ်ချင်းတွေ.. ကလေးငယ်ငယ်မပါတဲ့ မိသားစုတွေနေလို့ကောင်းတယ်.. စျေးလဲသိပ်မကြီးဘူး.. တစ်ချို့အိမ်တွေဆို private pool လေးတွေပါပါတယ်..
🚘ဘာနဲ့လျှောက်သွားကြမလဲ .. 🚘
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်းလေးဟာသေးတဲ့အတွက် အဝေးဆုံးတောင်မြောက်နေရာနှစ်ခုတောင် မိနစ် 50 ပဲကားမောင်းရတယ်.. ကျွန်းပေါ်မှာ ဘတ်စ်ကားပြေးပေမယ့် တော်တော်ကြာမှတစ်စီးလာတယ်.. Taxi တွေကလဲ တစ်ကျွန်းလုံးမှာ အစီး 30 ပဲရှိတော့ လမ်းမှာတွေ့ပြီးငှားလို့မလွယ်လှဘူး.. အဲ့ဒီတော့ ကားစီးလုံး ..ဆိုင်ကယ် စီးလုံး ဒါမှ မဟုတ် ATV စီးလုံး ငှားစီးမှပဲအဆင်ပြေတယ်.. အဲ့ဒါတွေ ငှားရတာလဲလွယ်တယ်.. ကိုယ်တွေက လူများတော့ ကားပဲစီးလုံး ငှားလိုက်တယ်.. international လိုင်စင်မလိုဘူး.. မြန်မာလိုင်စင်ပြလိုက်ရင်ကိုရပြီ.. စျေးလဲပေါတယ်.. High season တစ်စီးလုံးမှာ 24 နာရီမှ ယူရို 60 ပဲပေးရတယ်.. ဆီကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထည့်ရတယ်..အဲ့ဒါလဲပေါတာပဲ..လေးရက်လုံးလျှောက်သွားတာမှ ဆီက ယူရို 20ဖို့ပဲကုန်တယ်..2ယောက်ထဲဆိုရင်တော့ ဆိုင်ကယ်ထက် ATV စီးဖို့ပဲ အကြံပေးချင်တယ်.. သူက တစ်ရက်လုံးမှ ယူရို 40 ပါ.. ဒါမဲ့နေပူတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ စီးရတာ နည်းနည်းပင်ပန်းမယ်.. ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ်လျှောက်လည်ရတာတော်တော်မိုက်တယ်.. ကျွန်းကသေးတော့ GPS လေးဖွင့်ပြီး ရေဒီယိုကလာတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပင်လယ်ကြီးဘေးမောင်းရုံပဲ.. ကားပါကင်တွေကလဲ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူးရယ်.. ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့ ဘာမှခေါင်းစားစရာမလိုဘူး… အဲ..တစ်ခုတော့ ရှိတယ်.. ကားမရပ်ရဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ မရပ်နဲ့ ကိုယ့်ကားကို ခြစ်မိတာတို့ဘာတို့ဆို လျော်ရမှာ.. တောင်အတက်လမ်းတွေတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်မောင်းရမှာ.. လေဆိပ်..သဘောင်္ဆိပ်ရောက်တာနဲ့ တန်းပြီးကားငှားလို့ရပြီ.. ဒါပေမဲ့သဘောင်္ဆိပ်မှာကနေတော့ ကားတစ်ခါထဲမငှားပါနဲ့ လမ်းကတော်တော်လေးမတ်စောက်လို့.. ကိုယ်နေတဲ့နေရာရောက်မှ အဲ့ဒီနားတွေမှာ ကားငှားလို့ရတဲ့ service တွေအများကြီးမို့ ကြိုက်တဲ့ကားရွေးငှားလို့ရပါတယ်. စုံတွဲတွေအတွက် အမိုက်စား အမိုးပွင့်ကားတွေလဲကားလို့ရတယ်.
အပေါ်က နေလို့ရတဲ့နေရာတွေ အားလုံးဟာလည်ရမယ့်နေရာတွေပါပဲ.. ဘယ်နှစိရက်နေသင့်သလဲလို့မေးရင်တော့ အနည်းဆုံး3ညလောက်တော့နေသင့်ပါတယ်..ကိုယ်တွေ4ညနေခဲ့တာတောင်လည်လို့ဓါတ်ပုံရိုက်လို့မဝနိုင်ပါဘူး..ဒီလိုလှတဲ့ ကျွန်းလေးကိုရောက်မှတော့ အေးဆေးခံစား ၀တ်စုံတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်မှတန်မှာပါ..
Oia : နေဝင်ချိန်အလှဆုံးနေရာပါ..
အပြာရောင်အမိုးသုံးခုနဲ့ဘုရားကျောင်းကတော့ ဆန်တိုရိနီရဲ့ အမှတ်အသားပါ..အဲ့ဒါနဲ့အဓိက ဓါတ်ပုံရိုက်ရမှာပါ.. နေဝင်ချိန်ဆိုလူများလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့မကောင်းတော့တဲ့အတွက် ကို်ယ်တွေကတော့မနက်ပိုင်းတစ်ခေါက်ထပ်သွားပါတယ်.. နေ့လည်စာ စားတဲ့ဆိုင်တွေက စျေးကြီးပေမယ့် မြင်ကွင်းအရမ်းလှလို့ အနည်းဆုံး cocktails လေးဝင်သောက်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းပါလို့.. နေဝင်ချိန်မှာတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေပြည့်တတ်လို့ ဒီအတိုင်းလေးနေဝင်ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်..
Fira : သူ့ဆီကတော့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေစျေးပေါ စားလို့ကောင်းလို့ခနခနရောက်ပါတယ်.. shopping လဲတော်တော်မိုက်တယ်.. အဝတ်အစားတွေဘာဝတ်ရမှန်းမသ်လို့ မပါသွားရင်တော့ Fira မှာဝယ်ပါလို့ အကြံပေးချင်တယ်.. တကယ့်ကို ဂရိစတိုင် ချည်သားအရောင်တောက်တော်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်.. ဒီဇိုင်းတွေကလဲလှမှလှပဲ..အဲ..စျေးတော့ များတယ်.. ဂါ၀န်တစ်ထည်ကို အနည်းဆုံး ယူရို 20 လောက်ကနေစတယ်.. Oia မှာ Cocktail သောက်ရင်း နေဝင်ချိန်ကြည့်ဖို့စျေးကြီးရင်တော့ Fira မှာ အမိုက်စားဆိုင်လေးတွေရွေးပြီး မီးတောင်ကြားကနေဝင်ချိန်ကိုခံစားလို့ရတယ်..
Pyrgos : ဒီနေရာလေးမှာမတည်းဖူးဆိုရင်တော့ လာလည်ရမယိ့ထဲကို ထည့်ထားလိုက်ပါ..ရွာလေးက လူရှင်းတော့ ဓါတ်ဖမ်းလို့အရမ်းကောင်းတာရယ်.. သူ့ရဲ့ အိမ်ရှေ့လေးတွေမှာ..လှေကားထစ်လေးတွေမှာ..စက္ကူပန်းလေးတွေ..မြည်းလေးတွေ …ရွာသားကလေးတွေဆော့နေတာ လေးတွေကို မြင်ရတာက သင့်ကို တချိန်က ဆန်တိုရိနီကို ပြန်ခေါ်သွားစေမှာပါ..
Red Beach : ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး ကမ်းခြေပါ.. တကယ်ကကမ်းခြေတစ်ခုထက်ကို ပိုပါတယ်.. အနီရောက်တောက်နေတဲ့ တောင်ကြီးတွေနောက်ခံနဲ့ ကျောက်တုန်းတွေကြားရေဟာ အေးစိမ့်နေတာပဲ.. သဘာဝအတိုင်းထားထားတဲ့ကမ်းခြေမို့လားမသိဘူး တက်ရဆင်းရတော့လုပ်ရတယ်.. ဒါပေမယ့်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာ.. ကိုယ့်ဘဝမှာ တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးကမ်းခြေမျိုးမတွေ့ဖူးဘူးရယ်.. အဲ့ဒီကမ်းခြေနားရောက်ခင်ပဲ ကားကိုရပ်ထားခဲ့ရပြီး ..5 မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးမှာ red beach ကိုရောက်ပြီး .. အဲ့ဒီ red beach ကနေ.. boat အသေးလေးနဲ့ ဘေးကပ်ရပ်က ကားနဲ့သွားလို့မရတဲ့ black beach နဲ့ white beach ကို5ယူရိုပေးပြီး ဆက်သွားလို့ရသေးတယ်.. ဒီ Red Beach ကလဲ ကျွန်းရောက်ရင်မသွားမဖြစ်နေရာတစ်ခုပါ..
Kamari Beach / Perissa beach : မီးတောင်ပေါက်ကွဲရာကဖြစ်လာတဲ့ကျွန်းလေးဆိုတော့ ဒီကမ်းခြေက ကျောက်စလစ်ခဲအမဲလေးတွေနဲ့ ကမ်းခြေပေါ့.. ဒီမှာမတည်းရင်သွားလည်ရမယ့်နေရာတွေပါ.. သူကတော့ ညနေပိုင်းလောက်သွားရေကူးပြီး ညစာပါတစ်ခါတည်းစားလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့.. ပြီးရင် happy hour cocktails လေးတွေနဲ့ ပင်လယိလေးတွေကိုပါခံစားလို့ရပါတယ်.. သဲပြင်တွေပေါ်မှာပက်လက်ကုလားထိုင်တွေနဲ့ထိုင်ကြည့်ရတဲ့ outdoor ရုပ်ရှင်ရုံလဲ kamari မှာရှိသေးတယ်.. တစ်ယောက်ကို 8 ယူရိုပဲ..၀င်စမ်းကြည့်ခဲ့ပါအုန်း..
Cruise Tour : အချိန်သိပ်မရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီ cruise tour တွေကို မသွားပါနဲ့လို့ပဲ အကြံပေးပါစေ..သွားချင်ရင်တောင် အချိန်နညး်တဲ့ tour လေးတွေပဲရွေးသွားပါ.. ကိုယ်တွေတောင်5ရက်လောက်နေလို့ ဒီ tour ကိုသွားခဲ့တာ.. Cruise Tour အကုန်လုံးကသွားမယ်ဆိုရင် Fira ရဲ့ သဘောင်္ဆိပ်ကို ဆင်းရမှာပါ ..လမ်းလျှောက်ဆင်း /တက်ရင် မိနစ် 20လောက်ကြာမှာဖြစ်ပြီး လမ်းမလျှောက်ချင်ရင်တော့ ကေဘယ်ကား ( တစ်ကြောင်းကို 6ယူရို ) မြည်း ( တစ်ကြောင်းကို 6ယူရို ) နဲ့သွားလို့ရပါတယ်.. ဆန်တိုရိနီဆိုတာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်းလေးကျွန်းကို အစုလေးကိုခေါ်တာပါ.. ကိုယ်တွေနေတဲ့ ကျွန်းမကြီးက Thira လို့ခေါ်ပြီး အလယ်က ကျွန်းသေးလေးနှစ်ခုက Palia Kameni နဲ့ Nea Kameni လို့ခေါ်ပြီး ..နောက်ထပ် ကျွန်းတစ်ခုကတော့Thirassia လို့ခေါ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီတခြားကျွန်းတွေဆီ boat နဲ့လျှောက်လည်တာပါ.. အလည်ကကျွန်းလေးနှစ်ခုက မီးတောင်လေးတွေပေါ့..
အဲ့ဒီမီးတောင်ကို တက်ပြီး ကျွန်းနှစ်ခုကြားက ရေပူစမ်းထဲခုန်ချခြင်ရင်တော့ တစ်ယောက်ကို ယူရို 20 ပါ.. သူကတော့ သုံးနာရီပဲကြာတယ်.. မီးတောင်ပေါ်တက်ရင်တော့2ယူရိုထပ်ပေးရတယ်.. ရေပူစမ်းဆိုပေမယ့် တစ်ကယ်က ပင်လယ်ထဲခုန်ချတာပါ.. ရေမကူးတတ်ရင် တော့အဆင်မပြေပါဘူး…
ပထမ မီးတောင်ရယ်..ရေပူစမ်းရယ်..ကျန်တဲ့ Thirassia ပါရောက်တဲ့ တိုးကတော့ 26 ယူရိုပါ.. ကိုယ်တွေသွားခဲ့တာ အဲ့ဒီ tour ပါ.. Thirassia ကျွန်းရဲ့အခြေကိုပဲ boat ကရောက်တာမို့ မြို့ပေါ်သွားချင်ရင် မိနစ် 20လောက်လမ်းလျှောက်တက်ရမှာမို့ မတက်ကြတာများပါတယ်.. မတက်နိုင်ရင် ဒီတိုးသွားရတာမတန်ပါဘူး။။ သူက6နာရီလောက်ကြာတော့တစ်နေကုန်ပါတယ်..
နောက်တစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီကျွန်းသုံးခုလုံးအပြင် Oia မှာ ပါ sunset ကြည့်လို့ရတဲ့ Tour ပါ.. ယူရို 40ပေးရတယ်.. တကယ်မသွားသင့်တဲ့ တိုးပါ.. အပြန်မှာ Oia အပေါ်ထိရောက်အောင် လမ်းလျှောက်တက်ရမှာပါ.. ကိုယ်ကကားငှားထားပြီးသားဆိုရင်တော့ Fira ကနေ Oia ကို ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ်အေးဆေးသွားလို့ရတဲ့အတွက် အပင်ပန်းမခံပါနဲ့..
ဆိုတော့ကာ Cruise ကိုစီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ဆုံးက 20 ယူရိုတန်လေး စီးကြည့်ပါလို့ပဲပြောပါရစေ..
cruise tour တွေကလဲရောင်းနေကြတာအများကြီးပါ စျေးတွေကတူတူပါပဲ.. သဘောင်္တွေက ခုံနံပါတ်နဲ့မဟုတ်လို့စောစောတက်မှ နေရာရမှာပါ..
ခုလောက်ဆိုရင်တော့ .သိပ်လှတဲ့ကျွန်းလေးကို ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သွားရောက်နိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်.. အရမ်းကို ကဗျာဆန်ပြီးလှတဲ့နေရာလေးမို့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကခရီးသွားတွေသိပ်ကိုမျက်စိကျနဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အပြင် သူရဲ့လှပတဲ့အရာအားလုံးကိုနောက်ခံထားပြီး အမှတ်တရသိမ်းထားဖို့အတွက် pre wedding လာရောက်ရိုက်ကူးတဲ့သူတွေ.. စုံတွဲတွေအတွက်သိပ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးတွေမို့ ဟန်းနီးမွန်းအိမ်မက်လေးတွေအကောင်အထည်ဖော်ရာကျွန်းလေးဖြစ်လို့နေတာမဆန်းပါဘူး..
အချုပ်ပြောရရင်တော့ ဟန်နီးမွန်း ခရီးစဉ်မဟုတ်ရင် .ဆန်တိုရိနီတစ်ခုထဲကို3ညအိပ်လောက်သွားလည်တာမတန်လှတဲ့အတွက် သွားလည်ချင်တဲ့သူများအတွက်…ဂရိရဲ့ မြို့တော် အေသင်နဲ့ ဂရိမှာ ဆန်တိုရိနီလိုမျိုးလှတဲ့ ကျွန်းလေးတွေအများကြီးရှိသေးတာမို့ အဲ့ဒီနေရာလေးတွေပါ ပေါင်းစပ်လည်ပတ်မှသာ ကုန်ရကြိုးပိုနပ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က ဥရောပရဲ့ ရှန်ဂန် ဗီဇာကြီးရှိပြီးသားဆိုတဲ့ အခါကျတော့ တခြားဥရောပက ကိုယ်မရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လည်ပတ်ရင်လဲလေယာဉ်လက်မှတ် ..ဗီဇာလျှောက်ရကြိုးနပ်တယ်လို့ ကို်ယ်ကတော့အကြံပေးပါရစေ..
ကိုယ်ကတော့သိပ်ကို ဒဏ္ဍာရီ ဆန်ပြီးလှပလွန်းတဲ့ ဆန်တိုရိနီလို့ ခေါ်တဲ့ ဒီကျွန်းလေးကို ရောက်ခဲ့ပြီး သိပ်လှတဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေ.. အမှတ်တရတွေ.. နှစ်ပေါင်း 300 ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ Cave house လေးထဲမှာ နေခဲ့ရတာတွေ..သဘာဝနဲ့ လူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေက အချိုးညီစွာ လှပနေတာတွေကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတွက် သိပ်ကိုကျေနပ်ပိတိဖြစ်မိတယ်.. နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားချင်သေးလားလို့ တစ်ယောက်ယောက်ကမေးရင်တော့ ချက်ချင်းကို ခေါင်းညိတ်မိမှာ ဖြစ်ပြီး Photogenic ဖြစ်လွန်းလှတဲ့ ဒီကျွန်းလေးမှာနောက်တစ်ခေါက် ဘယ်လိုဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရမလလို့ တစ်ခါတည်းကို စိတ်ကူးယာဉ်ပစ်လိုက်တော့မှာပါပဲ..